, जाडोमा के खाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुराहरु
जाडो यस्तो मौसम हो, जहाँ खानामा अरुचि हुनेहरुलाई पनि खाना रुच्ने गर्छ
जाडोमा के खाने ? यस्ता छन् जान्नैपर्ने कुराहरु । अहिले जाडो मौसमको सिद्धिन लागेको अवस्थामा छ, तर जाडो पुरै हटेको भने छैन । जाडोमा परिवारका सदस्यलाई कसरी बचाउने र के खाने भन्ने कुरा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । हामीले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा यो छ की जाडोमा खानपान, जीवनशैली, करिअर, अध्यात्म, पीडा सबै पक्षलाई ध्यान दिएर हेर्‍यौं भने ती समस्या अवसर भएर आएको हुन सक्छ ।
जाडोमा पनि यो नियम लागू हुन्छ । जाडो यस्तो मौसम हो, जहाँ खानामा अरुचि हुनेहरुलाई पनि खाना रुच्ने गर्छ । सामान्य मानिसले पनि शरीर तताउन तातो खानपिनलाई नै माध्यम बनाउँछन् । आज हामीले जाडो मौसममा कस्तो चिज खानाले स्वास्थ्य लाभ हुन सक्छ भन्ने बारे प्रकाश पार्ने जमर्को गर्दैछौं पक्कै पनि यो पढेर फाइदा उठाउनु हुनेछ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं ।
जाडो मौसममा राम्रोसंग खान जानिएन भने विविध समस्याले पिरोल्न सक्छ । स्वास्थ्य मानिसको सवैभन्दा ठूलो सम्पत्ति हो हामीले स्वास्थ्यप्रति सजग रहेर खानपिनमा ध्यान दिन सकेको खण्डमा सुनमा सुगन्ध थपिने छ । यो मौसममा हामीले अदुवा, काजु, पिस्ता र बदाम, आलस, बेसार,सुप, चिकेन सुप जस्ता बस्तु सेवन गर्न सक्छौ ।